Inoita Sei Mitemo Mitsva yeVAT Inokanganisa Bhizinesi Rako Rokudonhedza mu2021？
E-commerce iri kuputika padanho rekujekesa. Vanhu vane mukana wekutenga zvinhu manhamba kupfuura zvavaimboita, zvinoreva kuti makambani mazhinji anotengesa zvigadzirwa zvavo online. Dambudziko rekorona ndiro raive simba rekufambisa mukugadzirwa. Nekudaro, mimwe mirau, mitemo, zvinodzora ...
Nzira yekuwana sei iyo Legit Kudonhedza Mumiriri mu2021?
Kutsvaga kwakakodzera uye kwakavimbika kudonhedza mumiriri kwave kuri "kurwadziwa" kwevakawanda kutanga-kubhizinesi reDropshipping. Sezvo E-Commerce ine mukana wekuve imwe yemahombekombe akakurisa uye ane hunyanzvi munyika. Nekuda kweiyi yazvino uno, vatengesi vevatengesi vakagadzirirwa iwe ...
Nei Uchikoshesa Kudonhedza Agents kune yako Kudonhedza Bhizinesi ino 2021?
Kudonhedza vamiririri vanga vari vakuru mutambo-vanochinja mubhizimusi rekudonha pakati pevaridzi vezvitoro. Ivo vakabatsira zvakanyanya kunze kwevanotengesa mabhizinesi varidzi kukwidziridza bhizinesi ravo kukura. Asi ndisati ndanyura mune aya anodonhedza maAgents, ndinoziva zvechokwadi kuti vamwe venyu vanogona kunge vasina b ...